दसैंमा कोरोना संक्रमण गाउँ-गाउँमा फैलिन सक्छ, २४ घण्टामै २७२२ जनामा संक्रमण | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दसैंमा कोरोना संक्रमण गाउँ-गाउँमा फैलिन सक्छ, २४ घण्टामै २७२२ जनामा संक्रमण
अशोज १७ गते, २०७७ - ०६:५०
काठमाडौं। संक्रमण लकडाउनकै बखत तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र यो चाडपर्वसँगै गाउँका कुनाकुनामा पुग्ने स्थिति रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ – राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले अहिलेकै जस्तो लापरबाही हुने हो भने दसैं-तिहारमा पहाडी जिल्लामा समेत फैलिने स्थिति रहेको बताए । ‘दसैं आउँदैछ, अब घर जानेहरूले गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउने स्थिति छ,’ उनले भने। दैनिक ७० भन्दा बढी जहाजबाट आउनेका कारण पनि संक्रमण गाउँगाउँमा पुग्ने स्थिति रहेको उनको विश्लेषण छ ।
कोरोना संक्रमणको दर वृद्धि हुँदै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वृद्ध र जोखिम समूहलाई जोगिन र जोगाउन अनुरोध गरेको छ । तर आफ्नो नियन्त्रण रणनीति भने अघि सारेको छैन । ‘कोही घरमा आए नजिक नजानू, वृद्धवृद्धालाई मास्क लगाएर दुई मिटर टाढाबाट भेट्नू,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ।
अशोज १७ गते, २०७७ - ०६:५० मा प्रकाशित